प्रचण्ड-नेपाल समुहको रोचक जुम मिटिङ: ओलीविरुद्ध के बन्यो प्लान ? « Himal Post | Online News Revolution
प्रचण्ड-नेपाल समुहको रोचक जुम मिटिङ: ओलीविरुद्ध के बन्यो प्लान ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २८ आश्विन ०८:४८
काठमाडौं- अहिलेको अवस्था कस्तो भने आफ्नो सरकारसङ्ग आफै डराउनुपर्ने, छुसुक्क भेट्यो कि अङ्गरक्षक वा ड्राइभरबाटै रिपोर्टिङ भैदिने, दूरसञ्चार र एनसेलको सिमबाट कुरा ग¥यो–रेकर्ड भएर सीधै सरकार प्रमुखसमक्ष कुरा पुग्ने । यस्तो खतरा आइलागेपछि सञ्चार सम्पर्क र सरसल्लाहको विधि अपनाइएको छ– जुम मिटिङ्गको ।
इन्टरनेटमार्फत भिडियो कलको सुविधायुक्त उक्त प्रविधिअन्तर्गत अघिल्लो मङ्गलबार सचिवालय बैठक डाकिनु दुई दिनअघि आइतबार बिहान नेकपाका खुमलटारनिकट शीर्ष पाँच नेताको जुम बैठकमा भएको रमाइलो संवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पेलाइबारे त्यसदिन नेताहरुवीच के–के छलफल भयो होला त ? किनभने त्यही छलफलको क्रममै उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतम ठुस्किएको थाहा पाएर सम्बन्ध सुधारको लागि बालुवाटारले बोलाएको थियो । र, त्यसयताको सचिवालय बैठक अहिलेसम्म अनिर्णित अवस्थामै छ ।
राजदूत र मुख्यसचिवमा भर्खरै एकलौटी नियुक्ति भएको पृष्ठभूमिवीच जुम मिटिङमा एकजना नेताले ‘अब ओलीजी नसच्चिने नै भए त ?’ भनेर सोधेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अब पनि हामी पार्टी निर्णय र हितभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले गर्ने जुनसुकै निर्णयबिरुद्ध माहौल बनाउने र कठोरभन्दा कठोर कदम चाल्न पछि नहट्ने हो भने सहिसाध्य हुन्न । म त्यहीअनुरूप योजना र कदम चाल्छु । कमरेडहरूले पनि त्यसै गर्नुपर्छ । मेरा दुई, तीनजना मान्छे चोरेर प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुहुन्न । किनकि हामीसँग सचिवालयमा बहुमत छ, स्थायी समितिमा झण्डै दुई तिहाई छ र केन्द्रीय समितिमा स्पष्टसँग दुई तिहाई नै पु-याएर देखाउने छौं’ भने ।
‘म त हैरान नै भैसकेँ । पार्टीभित्रको यत्रो रस्साकसी र लफडापछि बल्ल एउटा सहमति गरियो तर प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी फेरि राजदूत र मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुभयो । दिनदिनै मसँग बालुवाटारमा भेट हुँदा भने त्यस्तो केही कुरा निकालिएको थिएन ।’ अध्यक्षको उक्त कुरो सुन्नेबित्तिकै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले थप्नुभयो ‘मलाई त पहिले नै शंका थियो यिनले पार्टी निर्णय मान्छन् भन्नेमा ।’
अनि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भने, ‘तपाईंहरूले यिनलाई के चिन्नुभएको छ ! मैले त राम्रोसँग भोगेर आएको छु । प्रचण्ड कमरेडले तुरुन्त मिटिङ बोलाउनुस् अनि त्यहिँ छिनोफानो हुन्छ अब ।’
तीनैजना शीर्षस्थ नेताको कुरोमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सहि थपे । अनि सबैजनाले बहुमत हुँदाहुँदै आफूहरू पछाडि पर्नुमा गौतमले नै मौकामा लत्तो छाडेको विषय उठाउनुभयो । त्यहि कुरोलाई संकेत गर्दै खनालले भने ‘अब त वामदेव कमरेडले बुझ्नुभयो होला नि !’ माधव नेपाल पनि के कम, ‘तपाईंले हामीसँग एक वचन पनि सोधनी गर्नुभएन । अब भोग्नुस् केपीलाई । तपाईंले मसक्क आँटेको भए अहिले त्यो किस्सा सिद्धिसक्थ्यो’ भनेर पुरानो कुरा छुस्स कोट्याइदिनुभयो ।
गौतमको कमजोरी र त्यसैमा प्रधानमन्त्रीले खेल्नुभएको विषयलाई केलाउँदै खनालले ‘म पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै संसदीय दलमा मलाई हराएर केपीलाई जिताउनुभयो । अनि फेरि माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा हराउनुभयो । त्यहिँबाट तपाईंको साइत बिग्रिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ वामदेव कमरेड !’ भन्नुभयो । लगत्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले गौतमलाई सोधे– ‘वामदेव कमरेड, किन तपाईंले त्यस्तो गर्नुभएको ?’ वामदेवले झटपट जवाफ दिनुभयो– ‘नत्र के गर्नु त केपीले पार्टी फुटाउन तयार पारेका रहेछन् अनि !’
प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउनेसम्मको चाल रचेको भन्ने गौतमको जवाफमा असहमति जनाउँदै माधवले भने, ‘सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, आरके, सिपी जस्ताले त पार्टी फुटाएर चलाउन नसक्दा फेरि टाङ्गमुनि छिरेर आउनुपरेको थियो भने वहाँले फुटाउने रे ! झापा आन्दोलनका हस्तिहरूको त त्यो हालत भएको थियो । वहाँले न पार्टीको काम गर्नुभयो, न संगठनको । १४ वर्षचाँहि जेल बस्नुभएको थियो, त्यत्ति हो ।’
सबैको कुरो सुनेपछि गौतमले निकै गम्भीर हुँदै भने ‘मलाई केपीले जति धोका दिनुभयो ती सबै सहेँ । बारम्बार अपमानित भएर पनि बसेँ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पाएको धोकालाई ठूलो मानेको छैन । अब पार्टी र देशले थप धोका पाउन भएन भन्ने मात्रै मेरो चाहना हो ।’
जुम मिटिङको बिट मार्ने बेलामा गौतमले फेरि थपे, ‘मैले वहाँलाई पटक पटक सहयोग गरेँ । अब भने थाकिसकेको छु । वहाँलाई मैंले जति सहयोग कसैले गरेको छैन । तर मलाई साह्रै अपमानित गरियो । मेरो केही लागेन । मैले पनि वहाँलाई सुधार्न नसकि निचोड निकालेको छु ।’